Igbo, John: Lesson 081 - Jizọs na-asa ụkwụ nke ndị na-eso ụzọ ya (Jọn 13:1-17) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 081 (Jesus washes his disciples' feet)
B - IHE NA-EME KA OBI JEHOVA Dị (Jọn 13:1-38)
1. Jizọs na-asa ụkwụ nke ndị na-eso ụzọ ya (Jọn 13:1-17)
1 Ma mb͕e emere ememe ngabiga, Jizos mara na oge hour Ya abiawo na Ọ gālapu n'uwa nka rue Nna-Ya, n'ihi na ọ hururi ndi nke aka Ya n'anya, Ọ huru ha n'anya rue ọgwugwu. 2 Mgbe Ekwensu na-eri nri abalị, ekwensu tinyeworị n'obi Judas Iskarịọt, nwa Saịmọn, ịrara ya nye, 3 Jizọs, ebe ọ maara na Nna ahụ enyefewo ihe niile n'aka ya, nakwa na o si na Chineke bịa, na-agakwa Chineke biliri na nri anyasi, ma wepu uwe elu ya. O were akwa nhicha, ma kechie akwa ya. 5 Mgbe ahụ, ọ wụsara mmiri n'ime efere, wee malite ịsa ụkwụ ndị na-eso ụzọ, na-ehicha ha na ákwà nhicha ahụ e kere ya gburugburu.
Malite site na isi nke a Jọn na-aga n'ihu ọhụụ ọhụrụ na isiokwu nke ozioma ya. Tupu nke a, Jizọs na-akpọ ndị mmadụ n'ozuzu ha; N'ụzọ dị mwute, ihe odide ahụ, "Ìhè ahụ na-enwu n'ọchịchịrị, ọchịchịrị na-enwetakwa ya abụghị" ka e gosipụtara na ha. Ya mere, Jizọs ọ na-ada ada? Ee e! Ebe ọ bụ na ndị mmadụ n'ozuzu ha anabataghị ya, mana Onyenwe anyị họọrọ ụfọdụ ndị dị njikere wee chegharịa ma chịkọta ha na gburugburu ndị na-eso ụzọ. N'isiakwụkwọ ndị a, anyị ga-agụ otú Jizọs si kpọọ ndị a họpụtara ahọpụta, ebe nwoke ahụ na-alụ nwanyị ọhụrụ na-agwa nwunye ya okwu. Ọ bụ nke ha dị ka ọ bụ ya. Ịhụnanya Chineke na-aghọ ụkpụrụ nke okwu ndị a. Ịhụnanya a abụghị naanị ịchọ ọdịmma onwe onye nanị, ọ na-egosi oku ịkpọọ ọrụ. N'ime ịhụnanya Bible, ị na-agụnye inye ndị na-erughịrị onwe ha ịdị umeala n'obi. N'okwu ndị a, Jizọs na-ekpughe àgwà ya kachasị mma nye ndị na-eso ụzọ ya, na-akọwa ịhụnanya ya na njirimara nke ohu, na-egosipụta ndụ ya, ọnwụ ya na ibili ọzọ.
Jizọs kụziri na ọ ga-anwụ tupu ememe Ngabiga ọzọ. Ọ na-agakwuru Nna ya. Nke a ọ bụ nke gị? Ọ nọ n'ụwa, ma anya ya lere Nna ya anya. O sitere n'aka ya nweta ike, nduzi na ọṅụ, iji die ndị ikom ọjọọ dị otú a. N'ịdị n'otu nke Chineke, ọ hụkwara na Setan na-atụgharị uche n'ime obi nke onye na-eso ụzọ ọjọọ. Nwoke a ji nwayọọ nwayọọ gosi onwe ya anyaukwu, nganga na ịkpọasị. Otú ọ dị, Jizọs akpọghị onye ahụ na-abata asị asị, ma ọ bụ ịhụnanya Chineke hụrụ ya n'anya ruo ọgwụgwụ.
Ọ bụghị nanị na Jizọs na-ekwenyere onye nchụso dị ka à ga-asị na ihe ahụ mebiri. Judas, Caịfas, Herọd, Paịlet ma ọ bụ ndị ndú ndị Juu na ndị mmadụ ha ga-ekpebi ihe ga-abịa, ma n'ihi mmechuihu ya na ido onwe ya n'okpuru Nna ahụ mere mmụọ na ụmụ mmadụ niile nye ya. O kpebiri ịnwụ dị ka Nwa Atụrụ Chineke, ma họpụta oge usoro ihe omume. N'agbanyeghi ihe ojoo, o chefuru isi ya na ihe ozo. Jizọs bụ Onyenwe anyị nke na-agbanwe usoro akụkọ ihe mere eme.
Kraist acho ghi ilagha chikwute nna ya naan, kama ochoro ibiya n'iru Chineke. Ọ kụziiri ha ihe ịrịba ama na-eguzobe maka ịdị umeala n'obi, na-anọchite anya Chineke n'ihu ha. O wee ghọọ ohu; ọ kpọtara mmiri wee gbuo ikpere n'ala n'ihu ndị na-eso ụzọ ya ka ha saa ụkwụ ha ma kpochapụ ha. O mere onwe ya onye kachasị mfe n'etiti ha ma mara na Chineke na-efe mmadụ. Onyenwe anyi cho chichi na obioma, ma ochichi iru ha ma gbanwee ha dika onyinyo nke obi ya.
Jizos bu ihe omuma ayi di nma. Olee mgbe anyị ga-akpọ isiala n'ihu ya ma fee ya ofufe? Olee mgbe anyị ga-agbanwe obi anyị ma gbadaa azụ anyị ndị ziri ezi na ndị na-adịghị echefu?
Nwanna, ọ bụrụhaala na agbajighị gị, ọ bụghị ijere ụmụnna gị ozi ma ọ bụ hụ ndị iro gị n'anya ma ọ bụ na-emechi ọnyá nke ndị merụrụ ahụ, ị bụghị ezi Onye Kraịst. Ị bụ ohu ma ọ bụ nna ukwu? Cheta na Jizọs bụ ohu nke mmadụ niile, ọ na-ehulata ijere gị ozi. Ị ga-anakwere ọrụ ahụ ma ọ bụ gụọ onwe gị elu, na ị dị mma, ọ bụghịkwa mkpa ozi Chineke?
6 O we biakute Saimon Pita. O we si ya, Onye-nwe-ayi, Ì nāsa mirim? 7 Jisus zara ya, si, I mataghi ihe m'mere ub͕u a, ma i ghaghi ighọta ya. 8 Pita we si ya, Jisus zara ya, si, Ọ buru na emeghm gi, i nweghi òkè n'ebe m'nọ. 9 Saimon Pita we si Ya, Onye-nwe-ayi, ọ bughi nání ukwum, kama akam na isim. Jisus we si Ya, Onye nēbu aru kwesiri ib͕a ukwu-ya, ma ọ di ọcha. Unu onwe-unu di ọcha, ma ọ bughi unu nile. 11 N'ihi na Ọ mara onye nārara Ya nye, n'ihi nka ọ siri, Unu nile adighi ọcha.
Ndị ihere na-eme ndị na-eso ụzọ Jizọs mgbe ha na-asacha ụkwụ ha. Ha mara ihe ọ ga - eme ma ọ bụrụ "Nri Anyasị nke Onyenwe Anyị", ha gaara asacha ụkwụ ha n'amaghị ama. Onyenwe ha enweghi ọgbụgba ndụ ọhụụ n'etiti ha na Chineke nanị, kamakwa gosipụtara ha ọdịnaya na ihe ọgbụgba ndụ a pụtara: Ọ bụ ihe efu ma ọ bụghị ọrụ ịhụnanya na ọrụ bara uru.
Pita bụ onye na-anya isi na ịnụ ọkụ n'obi nke ndị ahụ na-eso ụzọ ya. O bu ghika Jizos choro ya; ya mere o gbaliri ịkwụsị ịsa ahụ, ịghara ige ntị n'ihe Onyenwe ya gwara ya. Mgbe ahụ, Jisos kọwara ihe omimi nke ime ụkwụ ndị na-eso ụzọ niile, dị ka à ga-asị na ọ na-agwa anyị okwu, "Ọ bụrụ na ị dịghị ọcha, ị nweghị òkè n'Alaeze ahụ, n'enweghị mgbaghara mmehie ị na-enweghị ike ịnọ na m." Ịsacha n'ọbara ya na-adịgide adịgide, na ịnọgide na-asacha ahụ na-aga n'ihu n'ihu. Ọ bụ onye na-eche gị nche site n'amara, na-edebe gị na mmekọrịta nke Ọkpara Chineke.
Na nke a, Pita hụrụ ìhè ahụ, na-ele aka ya ndị na-arụ ọrụ ọjọọ, ma na-eche echiche nke ụbụrụ ya na-aghọta atụmatụ nke Chineke. Ihere wee mee ya ma rịọ ka e mee ka ọ dị ọcha iji kpuchie ya. Jizọs mesiri ya obi ike, sị, "Onye ọbụla na-abịakwute m na-adị ọcha, zuru oke na okwukwe ya." Ya mere anyị na-amụta na ọ dịghị anyị mkpa ịmechapụrụ onwe anyị ma ọ bụ tinyekwuo ịdị nsọ, n'ihi na ọbara Jizọs na-asachapụ anyị mmehie niile. Odigh nso di uku karia nke zuru oke karia mgbaghara nke mmehie site n'obara ya. Dika anyi na-acho uzuzu kwa ubochi n'agaghari, anyi na-ekpe ekpere n'ekpere mgbe nile, "Gbaghara mmejọ anyi". Ọ bụ ezie na ụmụ chi chọrọ kwa ụbọchị iji saa ụkwụ ha, ụmụ nke ụwa a chọrọ nchacha zuru oke.
Jizọs lere ndị na-eso ụzọ ya anya wee sị, "Ị dị ọcha." Ọ gwara ha ka ha banye na Chineke. Nwa Atụrụ ahụ nwụrụ n'ihi ndị na-eso ụzọ ya ka ha kwe ka ha nọgide na mkpakọrịta Chineke. O dighi mmad diocha nime onweya, maojo Kraist naechachap anyi site ná mmehie niile.N'ụzọ dị mwute, ọ bụghị ndị na-eso ụzọ ya nile dị nsọ, dịka ọ dịkwa taa. ifodi nime ha naekwu okwu banyere] cha ah diocha ma naeme ka ha kwere nao bara Kraist, ma Mmo Nso emeghi ha. Mmụọ Setan kpaliri ịkpọasị, anyaụfụ, nganga na ịkwa iko n'ime ha. Ya mere, n'etiti ndị na-asọpụrụ Chineke, ị na-ahụkarị ndị nwere mmụọ na ịhụnanya maka ego. Jizos choro isa ukwu gikwa ubochi ma mee ka anyi zidi icheiche nke mmehie niile, wee mee kao dicha ocha nke oma na nnwekorita nke Chineke. Na-enyocha onwe gị, ị bụ ohu ma ọ bụ nna ukwu?
EKPERE: Onyenwe anyị Jizọs, anyị na-ekele gị maka ịbịaru onwe gị n'ebube na ịdakwasị anyị onye na-adịghị ọcha. I we ruru ala ib͕a ukwu ndi nēso uzọ-Gi, I we me ka obi-ayi di ọcha. Anyị na-efe gị na-arịọ gị ka ị nwere onwe anyị pụọ n'echiche niile dị mpako ka anyị wee kpọọ isiala wee ghọọ ndị ohu gị. Nyere m aka ịghọ onye kachasị ihe niile ma dị njikere ijere gị ozi na chọọchị m.
Gịnị ka Jizọs na-asa ụkwụ ndị na-eso ụzọ ya?
12 Ya mere, mgbe ọ sachara ụkwụ ha, yipụ uwe elu ya wee nọdụ ala ọzọ, ọ sịrị ha: "Ùnu maara ihe m meere unu? 13 Unu onwe-unu nākpọm, Onye-ozizí, na Onye-nwe-ayi: n'ihi na Mu onwem bu Ya. 14 Ya mere, ọ bụrụ na mụ onwe m, Onyenwe anyị na Onye Ozizi, asawo ụkwụ unu, unu kwesịkwara ịsa ụkwụ ibe unu. N'ihi na enyewom unu ihe-iriba-ama, ka unu we me dika m'meworo unu. 16 N'ezie asim unu, Ohu adighi-aka onye-nwe-ya uku, onye zite-kwa-ra uku kari onye zitere ya. 17 Ọ bụrụ na ị maara ihe ndị a, ị ga-agọzi ma ị mee ha.
Jisos amaliteghi ikwu okwu ya na okwu efu. Ọtụtụ mgbe, okwu ndị dị otú ahụ dị ntakịrị ma ọ gwụla ma emere ha. Ọ jụrụ ndị na-eso ụzọ ya ma ọ bụrụ na ha ghọtara ụda nke ọrụ ihe atụ ya, "Mepee anya gị ma hụ na m nọnyeere gị dịka otu nke gị, anaghị m anọ ọdụ n'elu gị n'ocheeze ka ị na-akwagharị n'ihu m dị ka ndị ohu. Akwụsịla m otuto, wee ghọọ otu onye n'ime gị Karịa nke ahụ, m hapụrụ ebe m dị ka onye nkụzi na onye nwe ụlọ ịghọ ohu. Ị ghọtalarị ntụziaka nke ịhụnanya Chineke nwere? onye huru ihuta onwe ya aka ma nagide ihe niile, na-agọnahụ onwe ya ma na-eje ozi n'anụ ahụ ma na-eme."
"I choro ibu ndi na-eso m ka m bu ihe omuma gi, abughi nani ikwu okwu, kama megharia nkuzi m .. Legha m anya: aburu m onye ohu ma oburu na icho iso m, hulata ma jeere ndi ozo ozi. ọ bụ n'etiti unu bụ onye chọrọ ịbụ onye mbụ, bụ onye dara mbà, ma onye na-ejere ndị ọzọ ozi ọma ma nọgide na-adị ala bụ n'ezie ezigbo."
"Echefula na Chọọchị bụ nchịkọta nke ndị nsọ zuru okè, ha niile na-amalite ịghọ. Emeela m ka ha niile dị ọcha ma ha bụ ndị nsọ, ma onye ọ bụla chọrọ ndidi na oge maka ọganihu ime mmụọ. Ihe a bụ ihe m na-eme ma nye iwu: Na-agbaghara ibe gị mmehie gị na mmehie gị, ekpela ibe gị ikpe, kama nyere ndị ọzọ aka, ehichala isi nke ndị ọzọ, kama ụkwụ ha, ọ dịghị onye ga-achị ndị ọzọ; I mere ihe a, ị ga-aghọta ihe m merela ka ọ dị ugbu a: abataghị m ka m jeere m ozi, kama ka m jee ozi. "Ndụ m bụ ọrụ, ịchụ àjà na ikwenye ekwenye maka mmadụ niile."
"Ana m eziga gị n'ụwa dị ka ndịozi nke ịhụnanya, onye ahụ zitere dị oke ka onye na-eziga, ọrụ mbụ gị bụ ịghọ ndị ohu dị ka m. Ọ bụrụ na ị ghọta nke a, ị ga-aghọta ụkpụrụ na okwu nke Iso Ụzọ Kraịst."
"Iwu nke abụọ m: Ọ bụrụ na ị maara nke a, ị ga-agọzi, ma ọ bụrụ na ị na-eme ya. Ọrụ bụ ọrụ na ịchụ àjà, ọ bụghị okwu, ekpere na mmetụta naanị. Mmetụta nke ije ozi bụ nke onye kwere ekwe. Site na nke a na-eme ọrụ dị iche iche nke ịhụnanya. Onye na-adịghị ejere ozi abụghị onye kwere ekwe. Ekpere ekpere na-enweghị enyemaka maka enyemaka, bụ ihu abụọ. Ejighi ezi ọrụ zọpụta gi; ọ bụ ọbara m na-azọpụta. Ma ọ bụrụ na ị na-ewedere ndị nọ n'ahụhụ, ndị wanderers, ma na-ejere ha ozi mgbe nile, ị ga-ejupụta na ọṅụ Chineke. Ezi obi Chineke na-ekpuchi ndị ohu Kraịst.
Nwanna, ị chọrọ ịghọ nna ukwu na onye nkụzi? Gaa na Jizọs. Ọ bụ onye nkuzi site na mma. Ọ na-eguzo n'iru gị ohu. Ị chọrọ ime ihe ọ kụziri? Malite site taa wee jee ozi. Rịọ n'ekpere, ebe, olee otu na onye ọ chọrọ ka i jee ozi. Ọ bụrụ na ị maara nke a, ị ga-agọzi ma ị mee ya.
Page last modified on March 05, 2020, at 06:29 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)